Maxaa sababay dib u dhaca ku yimid meydka Eng. Yarisow (Xog) - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Maxaa sababay dib u dhaca ku yimid meydka Eng. Yarisow (Xog)
Maxaa sababay dib u dhaca ku yimid meydka Eng. Yarisow (Xog)
Waxaa dib u dhac ku yimid keenista magaalada Muqdisho meydka marxuum Cabdiraxmaan Cumar Yariisow guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyadoo guddiga qabanqaabada aaska uu sheegay in la keenayo berri oo ah maalinimo Axad ah.
Sida ay ilo wareedyo ka tirsan safaaradda UK ay ku leedahay Muqdisho u xaqiijiyeen MOL, waxaa jira in diblomaasiyiin UK ay su’aalo ka keeneen dhimasha Eng Yarisow in ay ahayd fal argagixiso iyo in ay wax ka ogtahay dowladda Federaalka ah. Waxaa sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta UK duqa magaalada London oo isaga ruuxiisa shaki ka keenay dhimashada Eng. Yariisow.
Sida MOL ay u sheegeen qaar ka mid jaaliyadda Qatar in ay qaar ka mid ah carruurte Eng. Yarisow ay diideen in meydka aabahood la qaado iyada oo aan la helin cidda ka danbeysay dhimashadiisa, waxayna shaki ka muujiyeen in RW Kheyre uu ka lug leeyahay qaraxa lagu dilay aabahood.
Boqolaal ruux oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa dib uga soo laabanaya iyadoo saaka oo idil la sugayay keenista meydka.
Illaa iyo hadda lama oga sababta keentay dib u dhaca hase yeeshee dalka Qadar ayaa ah dal ay xayiraad ku soo rogeen wadamada qaliijka qaarkood.
Sababta dib u dhigtay keenista meydka Marxuum C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisow kuma aysan dhawaaqin guddiga iyada oo ay soo baxayaan in ay jirto cillad dhinaca farsamada duullimaadka ah.
Magaalada Muqdisho ayaa saaka inta badan la xiray,waxaana Ciidan badan la soo dhoobay Waddooyinka Muqdisho.
Yariisow ayaa waxaa uu Khamiistii u geeriyooday dhaawac 24kii Bishan ka soo gaaray Qarax ka dhacay aqalka dowladda hoose ee Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof oo ka mid ahaa maamulka Gobolka Banaadir.
Previous articleHa’yadda lacagta adduunka oo shaacisay in uu hoos u dhac ku yimid kobaca dhaqaalaha Somalia
Next articleRW Kheyre oo xil ka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay ciidanka XDS qeybta 21aad (Akhriso Digreetada)